eHimalayatimes | स्वास्थ्य र शैली | शिशुका आँखामा टल्किने गिर्खो ! खतरा हुन सक्छ !
22nd July | 2018 | Sunday | 8:52:55 AM
शिशुका आँखामा टल्किने गिर्खो ! खतरा हुन सक्छ !
पार्वती थापामगर POSTED ON : Thursday, 10 August, 2017 (9:32:38 AM)
काठमाडौं । सिरहा घर भएकी तामाङ थरकी एक बालिका जन्मेको १४ महिनामै दायाँ आँखाको बीच भागमा सेतो गिर्खा देखियो । केही दिन त अभिभावकले त्यो गिर्खामा त्यति चासो दिएनन् । गिर्खा बढ्दै गएपछि उनका अभिभावकले अस्पताल पु¥याए । अस्पताल पुगेपछि उनीहरू छाँगाबाट खसे । त्यो गिर्खा त्यति खतरनाक होला भन्ने कल्पनासम्म उनीहरूले गरेका थिएनन् ।
‘दूध चुसाउँदै गर्दा अचानक छोरीका आँखामा सेतो गिर्खा जस्तो टल्किएको देखेँ, तुरुन्तै परिवारमा सबैलाई देखाएँ’, बालिकाकी आमाले सम्झिँदै भनिन्, ‘हामी सबैले छोरीको आँखामा फुलो परेको अनुमान ग¥यौँ तर गिर्खाे बढ्न थालेपछि हेल्थपोस्ट पु¥यायौँ । त्यहाँ ट्युमर भएको भनेर क्यान्सर अस्पताल लैजान सल्लाह दिनुभयो ।’
उनीहरूले चिकित्सकको सल्लाहमा क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर पुर्याए । भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकले काठमाडौं लगेर अप्रेसन गर्न सल्लाह दिए । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालले आँखा निकालेर फालिदियो ।
क्यान्सरका कारण दायाँ आँखा निकालिएको हो । उनीसँग अब बायाँ आँखामा मात्र दृष्टि छ । दायाँतर्फ सञ्चो भएको छ तर उनलाई अरूले ‘एक आँखे’ भनेर जिस्क्याउँछन् । उनलाई आफ्नो एउटामात्रै आँखा छ भन्ने त्यति बोध हुँदैन तर साथीहरूले जिस्क्याउँदा भने उनी छक्क पर्छिन् । उनलाई रुन मन लाग्छ । अहिले उनी चार कक्षामा पढ्दैछिन् र १४ वर्षकी छन् ।
बालिकाका बुबाआमा उपाय खोज्दै तिलगंगा आँखा अस्पताल पुगे । त्यहाँ उनीहरूका लागि समाधान फेला प¥यो । उनीजस्ता पीडितका लागि तिलगंगा आँखा अस्पतालले नक्कली आँखा प्रत्यारोपण गरिदिने गरेको छ । बालिकाका बुबा छोरीको सौन्दर्य फर्काउन खर्चका लागि तयार छन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुई लाख सकियो, छोरीको आँखा बनाउन घरजग्गासमेत बेच्न पनि तयार छु ।’
तिलगंगा आँखा अस्पतालमै भेटिएकी मोरङकी चारवर्षे एक लिम्बु बालिकाको अवस्था उस्तै छ । डेढ वर्षको उमेरमा उनको आँखामा पनि सेतो गिर्खा देखिएको थियो । उनीहरूले गाउँघरको औषधि गरे, झारफुक पनि गराए तर अन्ततः आँखा नै निकाल्नु प¥यो । अहिले उनको सौन्दर्यको लागि नक्कली आँखा प्रत्यारोपण गर्ने तयारी भएको छ ।
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका शल्य चिकित्सक डा. बेन लिम्बुका अनुसार रेटिनोब्लास्टोमा भनिने सेतो गिर्खा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको आँखाको पर्दामा देखापर्ने क्यान्सर हो । धेरैजसो दुई वर्षमुनिका नवजात शिशुको आँखामा यस्तो क्यान्सर देखा पर्छ । उनका अनुसार बीस हजार शिशुमध्ये एकजनालाई यस्तो क्यान्सर भएको पाइन्छ ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालमा यस्ता शिशुको भर्ना हुनेक्रम बढेको छ र तीमध्ये आधाभन्दा बढीको आँखा निकाल्नुपरेको छ । बिरामी बचाउन आँखा निकाल्नुपरेको चिकित्सकको भनाइ छ । डा. लिम्बु यो रोगमा समयमै उपचार आवश्यक रहेको बताउँछन् । अभिभावकले पनि समयमै ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको उनले बताए । प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार हुन सके आँखा पनि जोगाउन सकिन्छ । यस रोगमा आँखामा मात्रै गिर्खा देखा पर्ने र अन्य अवस्था सामान्य देखिने भएकाले उपचारमा ढिलाइ हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
डा. लिम्बुका अनुसार आँखाको कालो नानीको बीच भागमा असाधारण सेतो ज्योति देखिनु, रंगिन फोटोमा आँखाको नानी सेतो देखिनु, आँखाको नानी अरुको भन्दा फरक देखिनु, आँखा रातो देखिनु, डेढो देखिनु, दुख्नु, दृष्टि कम हुँदै जानु रेटिनोब्लास्टोका मुख्य लक्षण हुन् । यस्तो कुनै लक्षण देखिएमा तुरुन्त आँखा अस्पताल पुर्याउनु पर्छ ।